မိုက်ခဲစိန် - အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြက်လုံးသက်သက်ပဲ။ American Democracy is A JOKE! - MoeMaKa Media
Home / Currents / Mike Sein / Opinion / Trump / USA / မိုက်ခဲစိန် - အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြက်လုံးသက်သက်ပဲ။ American Democracy is A JOKE!
မိုက်ခဲစိန် - အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြက်လုံးသက်သက်ပဲ။ American Democracy is A JOKE!
Currents, Mike Sein, Opinion, Trump, USA
ဖေဖော်ဝါရီ ၅၊ ၂၀၂၀ အမေရိကန်မြို့တော်ကြပ်ပြေး (ဝါရှင်တန်ဒီစီ)က အထက်လွှတ်တော်မှာ ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ်လူများစုမဲနဲ့ သူတို့သမ္မတကြီး ဒေါ်နယ်ထရန့်ကို impeachment စွပ်စွဲဖြုတ်ချရန်အမှုတင်ခြင်းအား ပလပ်လိုက်ကြတယ်။ သက်သေလည်း ခေါ်မစစ်ဘူး။ သူတို့အမတ်အင်အားအများစုနဲ့ မဲခွဲပြီး သမ္မတကြီးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးလိုက်ပါတယ်။ ထရန့်ကလည်း ဒါးကြိမ်းကြိမ်းထားတယ်လေ ငါ့ကို ဖြုတ်ချဖို့ ဒီမိုကရက်အတိုက်အခံအမတ်တွေနဲ့ သွားပေါင်းလို့ကတော့ နိုင်ငံရေးသေသွားအောင် တွေ့ရာသင်းချိုင်း ဒါးမဆိုင်းပဲတဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာကတည်းက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သက်သေတွေ အထောက်အထားတွေအရ သမ္မတကြီးထရန့်က နောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူနိုင်အောင်လို့ ဒီမိုကရက်ပြိုင်ဘက်ကို ကြိုနှိပ်ကွပ်ဖို့ ယူကရိန်းလို ပြည်ပနိုင်ငံကနေတဆင့် နံမယ်ဖျက်အမှုဆင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာ ဗူးပေါ်ကုန်လို့ မနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာ ဒီမိုကရက်ကြီးစိုးတဲ့ နန်စီပလိုစီဦးဆောင်သော အောက်လွှတ်တော်က သမ္မတကို စွဲချက်တင်ဖြုတ်ချဖို့ အဆိုတင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကိုလည်း ထရန့်နဲ့ အပေါင်းအပါများက မခန့်လေးစား ကပျက်ကယက် ပိတ်ဆို့တားဆီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အထက်လွှတ်တော်မှာ ခုံရုံးထိုင်တော့ ရီပတ်ဘလစ်အမတ်များက နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ထရန့်နဲ့အတူ အနိုင်ရဖို့ ဘက်လိုက်ပြီး ထရန့်ဘက်ကလိုက်ပြီး အခုတော့ ပလပ်ပေးလိုက်ကြပါပြီ။
သည်တော့ အာဏာကို ရူးမက်ပြီး လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ တင့်တယ်တဲ့ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာ တကယ်တန်းကတော့ ပြက်လုံးသက်သက်ပဲလို့ ဒုံးချလိုက်ရပါတော့တယ်။ အတိုက်အခံတွေ ဘာပြောပြော၊ ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုဆန္ဒတွေပြပြ၊ တရားဥပဒေကနေ ဘယ်လို သက်သေပြပြီး စွဲချက်တင်တင်၊ သတင်းစာမီဒီယာတွေက မည်သို့ပင် ဖွင့်ချသည် ဖြစ်စေကာမူ ရတဲ့အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အာဏာကို မျက်စိမှိတ်ပြီး အလွဲသုံးရဲတဲ့ အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့တဲ့ သမ္မတနဲ့ သူ့အစိုးရ သူ့အမတ်မင်းတွေအောက်မှာကတော့ ဘာမှ မထူးပါဘူးလို့ သက်သေထုတ်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ American Democracy under Trump and Republican is totallyajoke!!! သည်လိုမျိူး ဗိုလို ရေးပစ်လိုက်တော့မယ်။
သူ့ကို ကွင်းလုံးကျွတ်မလွှတ်ခင် မနေ့က ထရန့်ကြီးက လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်း မြွက်ကြားပါတယ်။ သူ့အတိုက်အခံ အမတ်ချုပ်ကြီး နန်စီပလိုစီကို လက်ဆွဲနှုတ်မဆက်ဘဲ လက်ရှောင်ပါတယ်။ နန်စီပလိုစီကလည်း ထရန့်ကြီး၏ တနာရီခွဲကျော် ရှည်သောမိန့်ခွန်းစာရွက်တွေကို စက္ကန့် ၃၀ အတွင်း ဆွဲဆုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီ ပြက်လုံး သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းတို့ ဗိုလ်စောမောင်တို့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့ ရဲ့ သမိုင်းဝင် ဟာသမိန့်ခွန်းတွေလိုပဲ ထရန့်မိန့်ခွန်းက ဟာသတွေချည်းပဲ။ ထရန့်လက်ထက်မှာ အမေရိကန်ပြည်ကြီး ကောင်းစားသွားလိုက်ပုံမှာ ရာဇဝင်ကို တွန်ရောလို့ မပြောရုံတမယ်။ အရင်တုန်းက အမေရိကန်တောင် သူ့အမေရိကန်ကို မမှီဘူးတဲ့။ သူ့ကြောင့် တိုင်းပြည်ကြီး ထက်အောက် မြေပြင် ကောင်းကင် တမွတ် ကြီးကျယ်ဖြစ်ထွန်းသွားလိုက်တာ အရင်ကသမ္မတတွေဟာ သောက်ရူးတွေချည်း ဖြစ်ကုန်အောင် မရှက်မကြောက် သူ့ကိုယ်သူ ပြောသွားလိုက်တာများ။ ဒါ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြက်လုံးသက်သက်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ရှားပါတယ်။
သည်လောက်တောင် တော်တဲ့သမ္မတ သူ့လောက်တော်တာတောင် သူ့လောက်မတော်ဘူး၊ လက်ခုတ်လက်ဝါးတီးပြီး လက်ခေ့ါက်မှုတ်ပြီး အောက်က မြှောက်ပင့်ပေးနေတဲ့ အာဏာရအာဏာရူး ရီပတ်ဘလစ်ကန်အမတ်တွေကလည်း ဟာသပဲ။ ပြက်လုံးတွေပဲ။ ဘယ်ဟာကို အတည်ယူလို့ရတော့မှာလဲ။ ထရန့်လက်ထက်မှာ ဘယ်ဟာကိုမှ အတည်ယူပြီး ပြောလို့ ဆိုလို့ မရတော့ဘူးဆိုရင် အားလုံးဟာ ပြက်လုံးတွေ ချည်းပဲပေါ့။ အမေရိကန်သတင်းမီဒီယာတွေကလည်း ထရန့်အရူးကွက်တွေကို အတည်ယူပြီး သတင်းတွေ ဒီဘိတ်တွေ ဆန်းစစ်ဝေဖန်ချက်တွေ လုပ်လုပ်ပြနေကြတာလည်း ပြက်လုံးတွေပဲ။
၂၀၁၆ မှာ ထရန့်တို့ အရူးချီးပန်းအကွက်တွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို နိုင်သွားတော့ မီဒီယာကြီးတွေက သင်ခန်းစာထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ ငါတို့တတွေက လူကြည့်များအောင် ကြော်ငြာရအောင် ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်လို့ သည်လိုပြက်လုံးတွေနောက်လိုက်ပြီး သတင်းလုပ်ခဲ့မိတာ မှားတယ်တဲ့။ ခွေးဟောင်တိုင်း သတင်းလုပ်နေမိတော့ ခွေးက လူဖြစ်ပြီး လူက ခွေးဖြစ်ကုန်ပြီလို့ ဝန်ခံကြတယ်။ နောက် သည်လို မလုပ်တော့ဘူးတဲ့။ အခုကော မီဒီယာတွေဟာ ပြက်လုံးတွေပဲ။ သူတို့လည်း ပြက်လုံးတွေကို သတင်းလုပ်ပြီး ထမင်းစားနေကြပြန်ပြီ။ အမှတ်မရှိတဲ့ သတင်းမဏ္ဍိုင်ဟာလည်း ပြက်လုံးတွေပဲ။
အံမယ် ထရန့်နဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကန်တွေချည်းပဲလားဟဲ့ဆိုပြီး အတိုက်အခံဒီမိုကရက်တွေ ကလည်း (နီပေါတွေ) ပါပဲ။ သည်ကောင်တွေလည်း ပြက်လုံးတွေချည်း ဟာသတွေချည်းပါပဲ။ ထရန့်ကိုပြိုင်ဖို့ ဒီမိုကရက်တွေ သမ္မတဝင်ပြိုင်ကြတာ လူ ၃၀ (ရဲဘော်သုံးကျိတ်လောက်နီးနီး) တောင် ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် သည်လူ ၃၀နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကနေ တော်လှန်ရေးလုပ်လို့ ရနေပြီ။ အဲသည် ဒီမိုကရက် ရဲဘော်၃ကျိတ်လည်း လုံးပါးပါးသွားလိုက်တာ အခု ၂၀၂၀ အိုင်အိုဝါအကြိုရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ဆယ်ချောင်းတောင် မပြည့်တော့ဘူး။ သူတို့ Primary Caucasus - သမ္မတလောင်းအကြိုရွေးကောက်ပွဲ ကွန်ပြူတာစနစ်က ပိုးထိုးလောက်တက် (Bug / Glitch) ဖြစ်နေလို့ အခုထက်ထိ သမ္မတလောင်းရလဒ် မထုတ်ပြန်နိုင်သေးဘူး။ ဟိုလူပဲ နိုင်သလိုလို ဒီလူပဲ နိုင်နေသလို နဲ့ ၊ ဒါလားဟဲ့ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီ - ပြက်လုံးတွေပဲ။
အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီ ၊ အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ ၊ အမေရိကန်အစိုးရလွှတ်တော်တရားရေး၊ အမေရိကန်မီဒီယာ၊ အမေရိကန်လူ့အခွင့်အရေး ... ဆိုတာတွေကို သူများတွေက အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီး မှတ်စုတွေထုတ် စာတွေရေး သင်ရိုးတွေ ပြဌာန်း၊ အတုယူ ခိုးချ၊ လိုက်လုပ်ကြ နောက်ကလိုက်ကြ။ သည်လိုမျိုးနဲ့ဆိုရင် အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီရဲ့ ပြက်လုံးတွေလည်း သူများတွေက လိုက်ပြီး ပြက်ကြ၊ ဟာသလုပ်ကြနဲ့ ရေစုံမျောလိမ့်မှာ စိုးရိမ်မိပါရဲ့။
၂၀၂၀ အဝင်မှာ အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြက်လုံးသက်သက်မျှသာတကားလို့ ဉာဏ်အလင်းပွင့်သွားမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားအတော်ကို စိတ်သက်သာရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာတကာ အကုန်လုံး အတည်ယူပြီး အကုန်လုံး အမေရိကန်လုပ်တွေဆိုတာ ဘုရားစွယ်တော်လို ပွားပြီး ကုသိုလ်ယူ ကြည်ညို ကိုးကွယ်နေမိလို့ နောက်ဆုံးတနေ့ စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေ ခြွတ်ချုံကျမှုတွေ ဒဏ် မပိခင်မှာ ဒါတွေဟာ အဆုံးတနေ့မှာ ပြက်လုံးတွေချည်းပါလားကွာလို့ ကြိုတင်စိတ်နှလုံးသွင်းပြီး ထားနိုင်ပြီဆိုရင် ခင်ဗျားအတော်ကို ပြန်ပြီး ကျန်းမာချမ်းသာလာလိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီကို ပြက်လုံးတွေသက်သက်မျှသာလို့ နှလုံးသွင်း မှတ်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင် ခင်ဗျား ငွေကုန် လူပန်း အချိန်ကုန် ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ လက်သီးလက်မောင်းတန်းထားသမျှ ခန ချလို့ ဟာသတွေကို ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောပြီး အသက်ရှည်ကျန်းမာ ချမ်းသာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
(အယ်ဒီတာ့မှတ်ချက် - မြန်မာဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်း ပြက်လုံးသက်သက်ပဲဆိုပြီးတော့ သွားမလုပ်ကြနဲ့နော်။ အမေရိကားမှာက ဘာပြောပြော ဘာလုပ်လုပ် ဟာသဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်တတ်လို့ မိုက်ခဲစိန်က ရေးရဲတာပါ။ မိုက်ခဲစိန်ကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီကို ဝေဖန်ရဲသူမဟုတ်ပါ။ သူသိတယ်လေ။ ဒါမျိုးရေးရင် နောက်စေ့ကနေ သူ့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ထည့်လိုက်မှာကိုး။ သတင်းစာသမားတယောက်တောင် ငပလီမှာ ချောင်းပြီး လုပ်ကြံခံရသေးဆိုလား၊ ကြားမိတယ်ဟုတ်)
မိုက်ခဲစိန် - အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြက်လုံးသက်သက်ပဲ။ American Democracy is A JOKE! Reviewed by MoeMaKa on 8:00 AM Rating: 5